Maitiro ekumisikidza uye chii chinonzi "Class modhi" paApple Watch | Ndinobva mac
Maitiro ekumisikidza uye chii chinonzi "Class modhi" paApple Watch
Imwe yezvinhu zvitsva zvewatchOS 7 ndiyo "Class modhi". Iyi sarudzo, iyo yakafanana neiyo theatre kana cinema modhi yeApple Watch, inopa sarudzo yekuvharira kunyorera uye kunetseka kuwedzera mukumisikidza usakanganisa mamiriro.
Mune ino modhi, wachi inogamuchira zviziviso uye mafoni ekukurumidzira asi mamwe mabasa ese akavharika kudzamara tasiya iyi "Class mode" yeiyo wachi. Tinogona kutaura kuti iyi modhi yakasiyana neyekunyarara modhi uye neimwe nzira iyo iyo wachi inotipa. yemamiriro akasiyana.
Kumisikidza iyi mode yakapusa asi kutanga pane zvese isu tinofanirwa kuiwedzera kune wachi sezvo iri deactivated mune dzakawanda kesi. Saka chinhu chekutanga chatinofanira kuita kumisikidza iyo icon munzvimbo yekudzora uye kune izvi isu tinofanirwa tsvedza chigunwe chako pachiratidziro chewachi yedu kubva pasi kusvika kumusoro wobva wadzvanya paHedha. Panguva ino isu tinofanirwa kutsvaga iyo icon yemukomana neruoko rwakasimudzwa uye tinya pane kuwedzera.
Rimwe remabasa enzira iyi ndi teerera mune yakatarwa nguva kana kirasi yemwana mudiki, semuenzaniso, saka zvakanaka kuti uzive kana ivo vakanyatsogadzira ichi chimiro uye neyekutanga uye yekupedzisira nguva. Zvese izvi zvakanyorwa muWatch app pane iyo iPhone kuti iwe ugone kuziva kana mwana wako akamiswa kana kuremedzwa iyi modhi ivo vari mukirasi. Kuti uzive kuti Kirasi yemaitiro yakabuda riini, isu tinovhura iyo Watch app, tinya maWatchwatch, ipapo akanganisa Apple Watch, uyezve Class mode.
Kune rimwe divi, kana iwe uchida kuishandisa kuti utarise zvakanyanya pane rimwe basa asi iwe usiri kuda kuita usina kuona nguva, unogona kurishandisa senge imwe nzira yeUsavhiringidze kana kuCinema modhi. Kuti ubude Class Class, isu tinoshandura iyo Dhijitari Korona uye tinya pane Buda sarudzo kuti usimbise. Kuti tishandise iyi Class modhi isu tinofanirwa kuve neApple Watch Series 4 kana imwe modhi yekupedzisira ine nharembozha uye tine watchOS 7 kana gare gare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekumisikidza uye chii chinonzi "Class modhi" paApple Watch
Dhawunirodha iwo mapikicha echiitiko chinotevera "Chimwezve chinhu"